Momba anay - Leyon Piping System Co., Ltd.
Vondrona LEYON naorina tamin'ny 1996. Tao anatin'ny roapolo taona mahery, LEYON mifantoka foana amin'ny fanomezana vahaolana amin'ny rafi-pitaterana ho an'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
LEYON ny famatsiana vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy ny kitroka famafazana vy sy kofehy, fantsona sy nipples, fifohazana, vy stainless vy ary fitaovana hafa, izay miely be ampiasaina amin'ny rafi-piadiana amin'ny afo, fantsona entona, plumbing ary fantson-drano fantson-drano, strukture, sns.
Nankatoavin'ny FM, UL, ISO, CE, BSI, LEYON dia mpamatsy mendrika ho an'ny orinasam-pifandraisana marobe, toa an'i Chervon, CNPC, CNOOC, CNAF, sns.
LEYON Manatanteraka fanaraha-maso hentitra amin'ny kalitao mankany amin'ny vokatra farany. Ny fiaraha-miasa amin'ny LEYON dia mihoatra noho ny fotsiny fanatanterahana mpividy, fa miara-miasa amin'ny ekipa matihanina.
Iza no manana fahatakarana lalina ny mpanjifa manokana sy mety ho filana.
Tao anatin'ny am-polony taona lasa izay, Leyon dia nanararaotra ny fotoana tsirairay hanamafisana ny tanjany, ary lasa farany amin'ny maha izy azy ankehitriny, vondrona orinasa lehibe misy teknolojia mandroso, fitaovana ary hery matanjaka feno. malaza noho ny vokatra feno ao aminy, fahaiza-manao famokarana be dia be, kalitao ary tanjaka R&D mahery. Miaraka amin'ny orinasa 80,000sqm miaraka amin'ny milina avy any DISA any Danemark, Sintokogio ary DJ AMF avy any Japon.
Ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa hatrany no tanjonay ary mifikitra hatrany amin'ny fitsipika izahay: ny hanomezana mpanjifa vahaolana sarobidy fa tsy manantona fotsiny vokatra.
Leyon Piping System Co., Ltd